सेयर बजारमा एनआरएन एवं विदेशीलाई भित्र्याउन धितोपत्र बोर्डको निर्देशन - Arthatantra.com
सेयर बजारमा एनआरएन एवं विदेशीलाई भित्र्याउन धितोपत्र बोर्डको निर्देशन
काठमाण्डौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को कारोबार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रविधि आटोमेटेड कारोवार प्रणाली भित्र्याउन धितोपत्र वोर्डले निर्देशन दिँदै नेपाली बजारमा एनआरएन एवं विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउन एवं विश्वसनीय वातावरण तयार पार्न भनेको छ ।
क्रस वोर्डर ट्रेडिङ÷लिस्टिङ (अन्तरदेशीय कारोबार तथा सुचीकरण), गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको पुँजी बजारमा प्रवेश गराउनका लागि उनीहरुलाई समेत विश्वसनीय हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रविधि आवश्यक भएको औंल्याउँदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
विश्व पुँजी बजारको अत्याधुनिक प्रणालीहरु प्रचलनमा आइसकेको स्थितिमा नेपालको धितोपत्र बजारमा समेत त्यसै अनुसार प्रणाली भित्राउन आवश्यक भइसकेको वोर्डको तर्क छ । वोर्डले भनेको छ– धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामनजस्य हुने र टेस्टेड सिस्टम भित्राउनेतर्फ पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
नयाँ प्रणालीमा जाँदा लगानीकर्ताले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै बजारको विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने वोर्डले निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशितः बिजमाण्डु, ३ चैत २०७२, १२.००
सेयर बजारको फेरि नयाँ रेकर्ड, लगानीकर्ता बैंकतर्फ काठमाण्डौं । सेयर बजारले फेरि नयाँ रेकर्ड कायम गरेकोछ भने लगानीकर्ताहरु बैंकिङ क्षेत्रको […]
सेयर बजार करिब ६ अंकले बढ्यो, लगानीकर्ता बैंकतर्फ आकर्षित काठमाडौं । आज सेयर बजार करिब ५ अंकले बढेकोछ भने सबैभन्दा वढी रकमको कारोबार भएको १० […]
अन्तर्राष्ट्रिय रिलिज नहुँदै ‘कबड्डी कबड्डी’ लिक्ड, ४० लाखभन्दा बढी घाटा काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रिलिज नहुँदै सिनेमा कबड्डी कबड्डी इन्टरनेटमा लिक भएको छ। […]
अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप झापामा हुने काठमाण्डौं । अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप झापामा हुने भएको छ। चैत १८ देखि २७ गतेसम्म […]
लगानीका लागि तयार हुनुहोस्, बजारमा आउँदैछ सवा अर्बको सेयर काठमाण्डौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेको आवेदन अनुसार सेयर बजारमा केही समयभित्रमै सवा […]
तपाईसँग नेको इन्स्योरेन्सको सेयर छ ? ल्याउँदैछ शतप्रतिशत हकपद्र ! काठमाण्डौं । महतो र विनायक समूहको प्रमुख लगानी रहेको नेको इन्स्योरेन्सले ७१ प्रतिशतले […]